ओखलढुंगामा नौ महिनामै उप्कियो कालोपत्रे ! - Sagarmatha Online News Portal
ओखलढुंगामा नौ महिनामै उप्कियो कालोपत्रे !
ओखलढुंगा । ओखलढुंगा–रुम्जाटार सडकको कालोपत्रे निर्माण सकिएको ९ महिना नबित्दै उप्किएको छ । गुणस्तरहीन निर्माण सामाग्री प्रयोग हुँदा सडक निर्माण नसकिँदै भत्किन थालेको थियो । सडकमा बिछ्याइएको डीबीएसटी कालोपत्रे उप्किएर खाल्डैखाल्डा परेपछि गाडी फस्न थालेका छन् । हिलो माटो र पानी जमेर मोटरसाइक पार गराउनै समस्या हुने गरेको स्थानीयको गुनासो छ ।
मापदण्डअनुसार सामग्री प्रयोग नगरेको, चिसो समयमा गरिएको पिच ६ महिना बित्दा पुरै भत्किएर खोलाजस्तो बनेको स्थानीय पासाङ शेर्पाले बताए । उनले भने, ‘एक वर्षपछि यो बाटोमा बलेरो पनि चल्न सक्दैन ।’
यो सडक कालोपत्रेको काम तीन पटक म्याद थपेर सकिएको थियो। २०७४ जेठमा १८ महिनामा सक्नेगरि राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरण, जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन ईकाइमार्फत विदेशीदाताको सहयोगमा निर्माण थालिएको थियो । वेश निर्माण गर्दै लापरवाही भएकाले सडकको काम नसक्दै भत्किन थालेको रुम्जाटार–ओखलढुंगा सडकमा सवारी चलाउने चालक नुण्डु शेर्पाले बताए । उनले अनुगमन नहुने, ठेकेदारले लापरवाही गरेकाले सडक भत्केको बताए । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई र ठेकेदार कम्पनी तामाङ कुमार जेभीबीच २०७४ जेठमा १८ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरि ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौतापछि लामो समय काम नगरी बसेको ठेकेदारले चिसो मौसममा अलकत्रा हालेका कारण सडक निर्माण नसकिँदै भत्किएको थियो । ११.१ किलोमिटर लामो उक्त सडकमा कालोपत्रे विछ्याउनका लागि ठेकेदार कम्पनीले मुआब्जा विवाद, बिटुमिन, अलकत्रा अभावलगायतका समस्या देखाउँदै काममा ढिलासुस्ती गरेको थियो । उक्त सडकको एसियाली विकास बैंक र स्वीस सरकारको सहयोगमा २० करोड ६८ लाख लागत रहेको छ ।
यो सडकको केही अफ्ठ्यारा भागमा अझैपनि कालोपत्रे गरिएको छैन । कालोपत्रे गरिएको भनिएको सडकका केही भागमा हिलैहिलो जमेको भेटिन्छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ ओखलढुंगाले सडकको कालोपत्रे उप्किएपछि २ किलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्रमा पुनः कालोपत्रे गर्न ठेकेदारलाई दबाब दिएको कार्यालयका इन्जिनियर सरोज केसी बताउँछन ।
कालोपत्रे उप्किएपछि कार्यालयले कुल लागतको ९ प्रतिशत रकम भुक्तानी नगरेको उनले दावी गरे । समयमा प्रभावकारी अनुगमन नहुने, ठेकेदारले कमसल सामग्री प्रयोग गर्ने चिसो मौसममा कालोपत्रे बिछ्याएका कारण भत्किएको प्रभाविकहरु बताउँछन् ।